“Madaxweyne Erdogan wuxuu mar waddooyinka ku iibin jiray rooti” | Gaaroodi News
Erdogan iyo xilli hore
Waxaa tobankii sano ee la soo dhaafay aad loo dareemay saameynta sii kordheysa ee dalka Turkiga uu ku yeelanayo caalamka.
Dalkan oo ku yaalla galbeedka qaaradaha Aasiya iyo qeyb ahaaan Yurub ayaa saameyntiisa milateri, midda dhaqaale iyo tan siyaasadeed aad loo dareemay sanadihii dambe.
Waxaa sidoo kale kobcay dhaqaalaha dalka Turkiga tobankii sano ee lasoo dhaafay sida ay sheegtay hey’adda lacagta adduunka ee IMF.
Dhanka saameynta milateri, Turkiga waxaa uu noqday dalka ugu awoodda badan dhanka milateriga ee dalalka bariga dhexe, waxaana muddooyinkii dambe uu hawlgallo milateri ka sameeyay dalalka Suuriya, Libya, dagaalka u dhaxeya Armenia iyo Azerbaijan, Qatar oo uu ka sameystay saldhig milateri iyo Soomaaliya oo uu ku leeyahay saldhigga milateri ee ugu weyn qaaradda Afrika.
Dadka wali ku ganacsada wadadad Kasimpasa, madaxweyne Erdogan waxay u arkaan in uu yahay mid kamid ah iyaga. Dhammaan biibitooyinka ku yaalaa xaafadaas waxaa ku dhegan sawiradi hore ee Erdogan oo xiran dharka kubadda cagta lagu ciyaaro.
Erdogan oo mashruuc xarigga ka jaraya
“Markii aan dalka Sacuudiga u aaday Xaj, sanadkii 1998, ma jirin cid qaadaneysay lacagta halka milyan ee Lira ee Turkiga oo waxaan isku dayay in aan sarifto oo aan ku badesho lacagta Sacuudiga balse markii aan dalka sacuudiga dib ugu laabtay 2010-kii, boqolkii Lira waxaan ku badeshay 250 lacagta Sacuudiga, markaa ayaan ogaaday in hadda ay nolal ka jirto dalka Turkiga,” ayuu yiri Ayhan. Erdogan oo da’ yar
Ka siyaasi ahan, waxaa lagu tilmamaa in uu yahay ra’iisul wasaarihii ugu guusha badnaa iyo shakhsi markii uu xabsiga kasoo baxay ku guuleystay doorasho, sarena u qaada halka dalka Turkiga uu ka taagnaa dunida